Sweden oo Fashilisay Weerar Argigixiso oo ka dhici lahaa Stockholm Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenSweden oo Fashilisay Weerar Argigixiso oo ka dhici lahaa Stockholm
April 7, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska 0
Intii lagu jiray fasaxii Easter-ka jimcihii la soo dhaafay, Hay’adda Amniga ee Sweden (SÄPO) waxay xireen laba qof oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen inay galaan dambi argagixiso. Xogta uu daabacay Dagens Nehter maanta waxay muujisay in ninka iyo haweeneyda la qabtay ee ka soo jeeda Afghanistan ay u wada noolaayeen shuraako (SAMBO) iyo in ay qorsheynayeen weerar argagixiso oo ka dhaca Stockholm inta lagu jiro fasaxa Easter, sida uu qabo tuhunka laamaha amniga.
Xeer ilaaliyaha guud ee waaxda amniga qaranka, Per Lindqvist, ayaa u sheegay wargayska in ay tahay kiis aan mudo dheer ka soo shaqeeynay.
Booliska amniga ayaa xiray labadan lamaane jimcihii la soo dhaafay, halka dacwad oogaha guud uu go’aansaday in la xiro Isniinta iyadoo looga shakisan yahay inay qorsheynayaan inay galaan dambi argagixiso.
Macluumaadka saxaafaddu wuxuu muujiyay in labada lamaane ay yihiin 3, sano jiro ayna yihiin muwaadiniin reer Afghanistan ah oo ka diiwaangashan degmo woqooyiga ka xigta Stockholm.
Wargeysku wuxuu sheegay in ciidamada amniga ay ogaadeen wax khatar ah khamiistii, maalin ka hor intaan la xirin, taasoo ku kaliftay inuu xiro sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar argagixiso oo ku soo wajahan.
Xogta ayaa sheegeysa in qorsheynta weerarka argagixiso uu bilaabmay 2-dii bishaan Janaayo waxaana laga fulin lahaa magaalada Stockholm.
Cadeymaha ay bixiyeen laamaha amaanka ayaa waxaa kamid ah xog laga helay aaladaha elektarooniga ah ee tuhmanayaasha.
Lindqvist wuxuu sheegay in “Säpo” iyo waaxda dacwad oogista ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerar argagixiso oo ka dhici lahaa Stockholm.